Eyona magazini yoyilo lomzobo | Abadali be-Intanethi
Uyilo lomzobo kunye nobugcisa bedijithali baye bahamba kunye ixesha elide ukuveza ubuchule obusemva kwabo, i iimpembelelo ezihlala zitshintsha kunye neendlela zobugcisa.
Iimagazini zoyilo ziye kwaye ziya kuba ngomnye we inkxaso engundoqo kuqeqesho lweengcali kweli candelo yobugcisa, enkosi kubo bahambelana nentsingiselo yehlabathi loyilo.
Nangona iluluntu oluqhagamshelwe kwiscreen phantse iiyure ezingama-24 ngosuku, kusekho abantu abathenga imagazini ngokwasemzimbeni. Uninzi lwe iimagazini ezinkulu zoyilo bahlala beqinile kwaye abayigatya ingcamango yokuqhubeka bebheja kwisiko kunye nenkqubo yokuhlela, abaqhubeka ngayo ukuprinta iimagazini zabo.
Ngaba uligcisa, umyili okanye unomdla kuphuhliso lwamva nje lwelizwe loyilo? Ewe, kweli nqaku siza kukubonisa ezona magazini zibalaseleyo zokuyila ukuba zibe sexesheni kuzo zonke ezona ndlela zihamba phambili.
Uya kuba nakho ukufumana iimbekiselo ezivela kulo lonke ihlabathi ngento eya kukuthatha ukuba wazi iindaba zangoku kwaye ugcine unolwazi kwaye uphefumlelwe.
1 Ezona magazini zoyilo lwegraphic kwi-intanethi
2 + uyilo
6 Eyona magazini yoyilo lwegraphic ebalaseleyo ngeSpanish
11 Ezinye iimagazini zokuyila
12 Komma –Magazini
Ezona magazini zoyilo lwegraphic kwi-intanethi
Ngokwemvelaphi yamaGrike, eli phephancwadi likhuthaza indalo ebonwayo, oko kukuthi, uyilo lomzobo, imizobo, iindaba ezijikeleze iwebhu kunye noyilo lwemveliso. Ihamba kwiimarike rhoqo kwiinyanga ze-6 kunye nokukhuthaza abantu ukuba bafunde malunga noyilo lwegraphic, ibamba iinkomfa, imincintiswano, imiboniso, njl.
Enye yeemagazini ezaziwa kakhulu, ezipapashwa ngekota. Ngaphakathi kwamaphepha ayo sinokufumana uhlalutyo lwenkcubeko ebonakalayo. Ithetha ngembali yoyilo, i-typography, izinto ezintsha eziphambili kweli candelo.
Yemvelaphi yesiFrentshi kunye nokupapashwa kwemihla ngemihla kwiwebhusayithi yayo. Imagazini ebalulekileyo kwilizwe lakho njengoko iveza indlela eyiyo yoyilo lwepanorama kwilizwe lakho nakwihlabathi jikelele. Ikhankanya ngokukhethekileyo ipanorama yaseSpeyin neLatin America, ngaphandle kwamathandabuzo liphephancwadi elimele lisoloko likufutshane yaye njengesalathiso.
Ngumbutho woyilo lobuchwephesha eFinland. Izisa iindaba zoyilo lwegraphic kufutshane nabalandeli bayo. Lo mbutho wenziwa ngabantu abangaphezu kwewaka kwaye baqhuba imisebenzi eyahlukeneyo ngaphandle kokubonisa iphephancwadi labo, imisebenzi efana neesemina, ukhuphiswano, iziganeko, phakathi kwabanye.
Eyona magazini yoyilo lwegraphic ebalaseleyo ngeSpanish
Eli phephancwadi lizibophezela ngokucacileyo xa kuziwa ekupapasheni abaculi kunye neeprojekthi zabo zokudala. Yazalwa ngo-2009 kwaye ijongene nezihloko ezinjengokuyila, ukusungula izinto ezintsha kunye noyilo, ihlala ithathela ingqalelo iindlela zamva nje zenkcubeko kunye noyilo.
Sinokuyifumana kuguqulelo lwedijithali okanye iprintwe ephepheni. Kwinguqulo yedijithali kukho ukhetho lokudala incoko phakathi kwabahleli nabafundi, oko kukuthi, sinokubeka uluvo lwethu okanye amathandabuzo kwaye siya kufumana impendulo malunga nayo.
Siya kufumana iphephancwadi elishicilelweyo nyanga nganye yaye sinokulifumana emakhayeni ethu ngokulithenga kwiwebhusayithi yephephancwadi.
Imagazini yemvelaphi yaseValencian, enesitayile esinengqondo kwaye igxile kwihlabathi loyilo lwegraphic kunye nomfanekiso. Yaziwa njengeyona magazini ibalulekileyo yeSpanish namhlanje enabafundi abamalunga nama-500 amawaka ngenyanga phakathi kweSpeyin neLatin America.
Ngezihlandlo ezithile, ngaphezu kokuthetha ngeziganeko zangoku kwihlabathi loyilo kunye nento ejikelezileyo, unokufumana ezinye izihloko kwinkalo yonxibelelwano, iziganeko, iinkomfa, njl.
Inokuthengwa kwiindawo ezahlukeneyo zokuthengisa kulo lonke elaseSpain okanye ngokubhalisela kwiwebhusayithi yayo.
Imagazini eyazalelwa eMadrid ngo-1989 kwaye isekwe kwiinkalo zokuyila, ukuyila kunye nokunxibelelana. Eli phephancwadi liye latshintsha kwimbali kwaye liye lakwazi ukuziqhelanisa nale nguqulelo yeendlela.
Isasaza umxholo woyilo kodwa nakwizihloko zokufota, imizobo kunye nobuchwepheshe obutsha phakathi kwabanye.
Singayifumana ngokubhalisela kwaye ipapashwa ngokushicilelwa rhoqo kwiinyanga ezimbini. Amanqaku ahlukeneyo apapashwa ngeveki kwiwebhusayithi yayo ngokubhekisele kwizihloko esizikhankanye ngaphambili.
Yapapashwa okokuqala ngowe-1989 kwikomkhulu laseSpeyin, iMadrid. Yenye yeemagazini eziphambili kwinkalo yegraphic kunye noyilo lwezakhiwo kumazwe angaphezu kwama-50, kwaye ikwakhuthaza ubudlelwane phakathi kwamacandelo ahlukeneyo oshishino, into efanayo phakathi kwabayili kunye nabafundi. Iphucula ixabiso loyilo emva kweeprojekthi ezibonisayo kunye nokuveliswa kwenkcubeko.
Ipapashwa rhoqo kwiinyanga ezintathu kwifomathi ebonakalayo nakwiwebhusayithi yayo ngevenkile yayo.
Ezinye iimagazini zokuyila
Yimagazini ehlelwe ngabafundi abahlelayo, enemibhalo ekumgangatho ophezulu kwaye esimema ukuba sifunde ngemixholo eyodwa kunye nomsebenzi wabayili abahlukeneyo. Kanye nezidanga ze-bachelor kunye ne-master's, ke oku kubangela umthombo wolwazi kwabo banomdla kuyilo lwegraphic.
I-Komma lupapasho lwasimahla kwaye ukuba uyarhuma bakuthumelela ikopi yemagazini eza kupapashwa ngokukhawuleza.
Ipapashwe okokuqala eTokyo ngo-1953. Igxininise kwihlabathi lonxibelelwano olubonakalayo, ukuyila kunye nokuchwetheza. Ijongana nezihloko malunga nazo zonke izitayile zoyilo ezihlala eJapan.
Ipapashwa ngesiJapan nangesiNgesi kwaye ifumaneka rhoqo ngonyaka.
Imagazini yaseJamani ebonelela ngeyona ndlela igqwesileyo yoyilo lwegraphic lwangoku, umzobo, ukufota, uyilo lokuchwetheza, ushishino kwaye inika indawo ebalulekileyo kwitalente entsha.
I-Novum inembali enkulu emva kwayo eyenza ibe ngumthombo omkhulu wokudluliselwa.
Imagazini yaseSweden enenguqulelo ye-intanethi enemiba elishumi epapashwa ngonyaka ejongene nophuhliso olutsha kunxibelelwano olubonakalayo. Ijolise kwiingcali njengomthombo wolwazi kunye nenkuthazo yoyilo lwegraphic kuphuhliso olulungileyo lwezimvo zegraphic.
Yila iimagazini ezisinceda sihlale sisazi njengoko eli hlabathi litshintsha rhoqo. Ziyifestile elungileyo yenkuthazo kwiiprojekthi ezizayo. Oku kukunika ithuba lokufumana ulwazi olutsha ngelixa ufunda malunga neendlela ezintsha.
Ngaba ukhe wayifunda naliphi na kula maphephancwadi? Ngaba uyazi ngakumbi ukuba wenza ireferensi yabayili bemizobo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Eyona magazini yoyilo lwegraphic